Tonga ny kinova vaovao an'ny KDE Plasma 5.16 ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Navoaka ny kinova vaovao an'ny KDE Plasma 5.16, noforonina tamin'ny sehatra KDE Frameworks 5 sy ny tranomboky Qt 5 miaraka amin'ny OpenGL / OpenGL ES. Aiza amin'ity kinova vaovao an'ny KDE Plasma ity dia misy fanatsarana vaovao eo amin'ny tontolo iainana.
Entre ny fanatsarana lehibe izay ahitantsika fanatsarana ny rafitry ny fampandrenesana, Fanovana ny famolavolana efijery an-trano, fanohanana Wayland, ary maro hafa.
1 Inona no vaovao ao amin'ny KDE Plasma 5.16
1.1 Fanatsarana ny fikirakirana widget namboarina
1.2 Mpizara sary
1.3 Ivotoerana fametrahana apetraka sy plugins
Inona no vaovao ao amin'ny KDE Plasma 5.16
Amin'ny famoahana ity kinova vaovao ity dia azontsika atao ny manasongadina izany Nihatsara ny fitantanana ny birao, ny kanto ary ny widget.
Toy izany ny rafitry ny fampandrenesana izay naverina nosoratana indray. Aza apetraka ny maody manakorontana mba hanafoanana vonjimaika ny fampandrenesana, fanatsarana ny fananganana firaketana an-tsoratra ao amin'ny tantaran'ny fandraisam-bahiny, raha toa ka azo aseho ny fampandrenesana marim-pototra rehefa mandeha amin'ny maody efijery feno ny fampiharana, ny fampahalalana momba ny kopian'ny rakitra ary ny famitana ny famitana, ny fizarana fampandrenesana amin'ny configurator dia nitarina.
Ny interface ho an'ny fisafidianana lohahevitra dia ampiharina mba hampiharana tsara ireo lohahevitra amin'ireo takelaka. Nampidirina endri-javatra vaovao ho an'ny lohahevitra, ao anatin'izany ny fanohanana amin'ny famaritana ny famantaranandro analog sy ny blur any ambadiky ny lohahevitra.
Ao amin'ny maody fanovana tontonana dia nipoitra ny bokotra "Asehoy ny Solony ..." izay ahafahanao mamadika haingana ny widget amin'ny safidy hafa.
Ny endrik'ireo efijery fidirana sy fidirana dia novaina, ao anatin'izany ny bokotra, sary masina ary marika;
Fanatsarana ny fikirakirana widget namboarina
Ao amin'ny widget mba hamaritana ny lokon'ny pixel tsy mitombina eo amin'ny efijery nanampy fanohanana ny loko mihetsika amin'ny editera lahatsoratra sy palety mpanova sary.
Nanisy tondro hetsika hetsika fandraisam-peo amin'ny fampiharana ao amin'ny lozisialy, izay ahafahanao manova haingana ny volanao amin'ny kodiaran'ny totozy na mampangina ny feo amin'ny bokotra afovoany afovoany.
Ao amin'ny varavarankely misy ny sehatr'orinasa birao, ao amin'ny maody fampisehoana, ny sary amin'ireo lahatahiry voafantina dia aseho miaraka amin'ny fahafehezana ny marikao.
Ny menio ny zava-misy dia nohavaozina indray ao amin'ny mpitantana ny lahasa ary nanampy fanampiana amin'ny famindrana haingana ny fikandrana avy amin'ny birao virtoaly mankany amin'ilay misy ankehitriny amin'ny fipihana ny bokotra afovoany afovoany.
Ao amin'ny lohahevitra Breeze ho an'ny aloky ny varavarankely sy ny menio, miverina ny fampiasana ny mainty, izay manatsara ny fahitan'ny singa maro rehefa mampiasa ny loko maizina.
Fiovana lehibe iray hafa amin'ny KDE Plasma 5.16 dia fampiharana ny fanohanana voalohany ho an'ny fivoriana any Wayland rehefa mampiasa mpamily NVIDIA tompony.
Ny rafitra miaraka amina mpamily NVIDIA tompona mihazakazaka Qt 5.13 dia manana olana ihany koa amin'ny fanodikodinan-tsary rehefa avy miverina amin'ny fomba torimaso.
Tamin'ny fivoriana nifototra tamin'ny Wayland, dia niseho tamin'ny fisintomana sy ny fandatsahana ireo varavarankely fampiharana mampiasa XWayland sy Wayland.
Miaraka amin'izany nodinihina ireo lohahevitra maodely masaka amin'ny efijery fisoratana anarana ary safidy reboot no nampiana tao amin'ny pejy Session Settings (Desktop Session) miaraka amin'ny fifindrana mankany amin'ny maody configur UEFI.
Ary koa ny fanohanana feno amin'ny fanamboarana ny touchpad rehefa mampiasa ny mpamily Libinput amin'ny X11.
Ivotoerana fametrahana apetraka sy plugins
Ao amin'ny pejy miaraka amin'ny fanavaozana ny rindranasa sy ny fonosana, ny mari-pamantarana tsirairay dia 'alaina' ary 'apetraka.
Ny fanatsarana dia nohatsaraina tamin'ny fahavitan'ny asa, nanampy tsipika feno hanombanana ny fizotry ny hetsika. Rehefa manamarina ny fanavaozana dia omena ny mari-pamantarana "Sahirana";
Fanatsarana sy fanatsarana ny fonosana amin'ny endrika AppImages sy fampiharana hafa ao amin'ny lisitry ny store.kde.org.
Nanampy safidy hivoahana ny programa aorian'ny nahavitana fametrahana na fanavaozana ny asa.
Ao amin'ny menio «Sources», nampiana ny fampisehoana ireo nomeraon'ireo kinova azo apetraka avy amina loharano samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Tonga ny kinova vaovao an'ny KDE Plasma 5.16 ary ireto ny vaovaony
Mozilla dia te-hanolotra kinova Premium an'ny serivisy Firefox